I-Teacher Teachers Resume-Learning the Basics
Ootitshala Ukuba ngu Mfundisi
Ukufunda iziSeko zoMfundisi weBafundi
Iingcebiso ezibalulekileyo zokwenza iRumise ye-Amazing
Kubalulekile ukucinga ngomfundi wakho wokufundisa ngokutsha njengesixhobo sakho sokuthengisa. Eli phepha liphepha lingaba ngumphambili wokufumana umsebenzi wokufundisa . Sebenzisa ezi zilandelayo ngcebiso njengesikhokelo njengoko uhlakulela kwakhona ukufundisa kwakho.
Ezi zihloko ezine zilandelayo zifuneka ukuba zibe nazo. Eminye "ikhetho" ngezantsi kufuneka ifakwe kuphela xa unamava kuloo ndawo.
Oku kubandakanya kwakho:
Inombolo yefowuni (ukuba unenombolo yefowuni yongeza kwakhona)
Idilesi (ukuba unesigxina esisigxina kunye nelo dilesi uze uluhlu zombini)
Igama lakho kufuneka liprintwe ngokusebenzisa ubukhulu befonti ye-12 okanye ye-14, oku kuya kunceda igama lakho lime. Amagama afanelekileyo asetyenziswayo yiArial okanye i-New Times yamaRoma.
Le yilapho ubhala zonke izatifikethi zakho kunye nokuvumela kwakho, ngamnye kufuneka abe kumgca ohlukile. Ukuba awuqinisekisiwe okwamanje, ke uluhlu lwesatifikethi kunye nomhla okulindeleke ukuba uwufumane.
I-New York State Certified Certification, ekulindelekileyo ngoMeyi 2013
I-Middle Grade Endorsement ekulindeleke kwi-Social Studies
Qiniseka ukuba uquka ezi zilandelayo:
Ukuba ungumfundi osandul 'ukuza okanye ozayo ke ngoko icandelo kufuneka libe phezulu.
Qinisekisa ukuba uyazi iqondo oza kulufumana kwaye uluhlu ngokuchanekileyo.
Faka i-GPA yakho ukuba i-3.0 okanye ngaphezulu.
Ukuba awuzange uphumelele, ke uluhlu lwakho "olulindelekileyo" okanye "elindelekileyo".
I-Bachelor yeSayensi kwi-Elementary Education, iYunivithi yeSizwe yeNew York Collage eBuffalo, elindelekileyo ngoMeyi 2103
UMphathi wezeNzululwazi kwiMfundo, iYunivesithi yeSizwe yaseNew York Collage eBuffalo, ngoMeyi 2013
Eli candelo liyona nxalenye ebaluleke kakhulu yakho yokuqalisa. Faka kuphela amava afanelekileyo kwaye abonakalisa izakhono zakho kunye nempumelelo. Kukho iincwadana ezimbalwa ongayisebenzisa kweli candelo. Khetha ukhetho olunamava amaninzi osebenza nabo abafundi. Ukuba unamava amaninzi, unako ukongeza ngaphezulu kwecandelo elinye.
Ukufundisa Okumalunga Namava Eli candelo liya kubandakanya amava akhokhelwayo okanye ahlawulwayo asebenze nabantwana. Oku kungabandakanya umqeqeshi, umqeqeshi wezemidlalo, umcebisi wekampu, njl. Ngaphantsi kwoluhlu lwesithuba ngasinye kwiitatimenti ezimbalwa zeentetho malunga nento oyenzile ngexesha lelo xesha.
Umfundisi , i-Huntington Learning Centre, uKenmore, eNew York, ngohlobo lwe-2009
Abafundi abaqeqeshwe ngaphambili b-k ukuya kwe-12 kwibakala ekufundeni nasezibalo
Uncedo lukaTitshala , 123 i-Preschool, iTonawanda, eNew York, Fall, 2010
Ukujongana nokhuseleko kunye nokunakekelwa kwabantwana
I-Experience Experiential Field Le candelo apho udibanisa khona amava akho okufundisa abafundi. Qinisekisa ukuba uquka ibakala osebenze ngalo kunye nokuxhomekeka. Faka imizekelo ethile yento oyenzayo nabafundi.
Kusebenza ngabanye nabafundi ukuphuhlisa izakhono zokufunda ngeemidlalo ezisebenzisayo.
Ukuphuhliswa nokuphunyezwa kweyunithi yezifundo zezenhlalakahle kwiindawo ezimbini zokufundela.
Izifundo zazibandakanya ukufunda okusebenzisanayo, indlela yamava ngolwimi, izandla-ngamava kunye nokufundiswa kwamanye amazwe.
Amavavolontiya amava / IiNkonzo zoLuntu kwiNkonzo zoLuntu obenayo apho uxhasa abantu, uluntu okanye iinkonzo. Oku kunokuvela kwimibutho yonqulo ukuxhasa imali.
Amava okuSebenza Eli nqanaba apho ungabandakanya amava afanelekileyo onawo kwamanye amashishini. Gxininisa kwizakhono ongazisebenzisa eklasini ezifana nokulawula, ukuqeqesha, ukuthetha koluntu, njl.
Abasebenzi abatsha abaqeqeshiweyo kwi-Engine Engine Optimization
Umqulu wokuhlawula we-About.com
Amacandelo alandelayo "angakhetha." Yongeza kuphela ii-header ezongezelelweyo ukuba ucinga ukuba izongeza isibheno kumqeshi oza kuba ngumqeshi.
Iintlonelo - Uluhlu lweDeveli, i-Scholarships, nantoni na ehlobene nokufundisa.
Izakhono ezizodwa - Amandla okuthetha ulwimi lwesibini, uqeqesho kwiikhomputha.
Ubulungu boBugcisa - Bhala uluphi na unxulumano lwemfundo ongowakho.
Inkqubo ehambelanayo - Bhala uluhlu lweeklasi ezichaphazelekayo ozithathileyo.
Imithombo: IiNkonzo zeNkonzo
Phunyezwa iSicwangciso soShishino seTutoring
Iingcebiso eziphezulu zokufumana uNgxowa-titshala woTitshala
4 Isibonelo Sokufundisa Iimpawu zefilosofi
8 Izimpawu Ufanele Ube Ngutitshala
Imibuzo yoLuntu oluPhezulu ngokuPhezulu
Iseluleko seMandla esivela kubaTitshala beeNtsholongwane
Izakhono eziSebenzayo zootitshala ootitshala banamhlanje
Yiyiphi i-Teaching Teachers Really Like
Ngoko Ufuna Ukuba Ngutitshala: Izinto Ezi-8 Ukuzi
5 Amadoda Aphefumlelweyo uMartin Luther King, Jr. ukuba abe yiNkokheli
I-Pros & Cons ye-No Child Beft Act Act
Ukufudumala kweFusion Example Example - Ice Melting
Iintlobo ezili-10 ezibaluleke kakhulu zeNzuki zasePolen
Isicabucu Esilwa Nxamnye ne-Clock
'Ukufa Ngaba Singaba Nxalenye: 25 Amafilimu amakhulu amaRoma amaHorry
Iibakala zeBakala lesi-2
Imfazwe YaseMerika: iMagosa Jikelele uGeorge McClellan
I-Lady Godiva I-Famous Ride ngeCoventry
Uluphi uncedo loPhando?
I-Funniest Memes ukusuka kwiNgqungquthela yesiBini kaMongameli
Institute of Niels Bohr
I-Biography kunye neProfayili yeVelvet Revolver
Yintoni iYin neYang imele?